Neymar oo soo barbareeyay rikoodhka Romário oo ah ciyaaryahanka saddexaad ee ugu goolasha badan taariikhda xulka Brazil – Gool FM
(Brazil) 10 Juunyo 2018. Ciyaaryahanka reer Brazil ee Neymar Jr ayaa halkiisa kasii waday in uu cid kasta u xaqiijiyo sida uu diyaar ugu yahay ka qeyb galkiisa dhacdada ugu weyn kubada cagta ee koobka aduunka oo maalmo yar uun kaliya ka harsan.
Neymar ayaa wuxuu qeyb ka ahaa kulankii saaxiibtinimo ay maanta uu xulka qaranka Brazil 3-0 ku garaaceen dhigooda Austria, kaasoo ka mid ah kulamada diyaar garowga ee koobka aduunka.
Xidiga kooxda Paris Saint-Germain ee Neymar Jr oo dhawaan kasoo laabtay dhaawiicii darnaa ee kasoo gaaray dhanka canqowga ayaa dhaliyay kulankan goolka 2-aad ee ciyaarta, ahna goolkiisii 2-aad tan iyo markii uu dhaawac kasoo laabtay.
Goolka uu ka dhaliyay Neymar Austria ayaa wuxuu ka sameeyay rikoodh taariikhi ah, si uu u noqdo gooldhaliyaha ugu sareeya taariikhda xulka Brazil.
Neymar ayaa soo barbareeyay rikoodhka gooldhalineed ee Romário kadib markii uu maanta dhaliyay goolkiisii 55-aad ee maaliyada xulka qaranka Brazil, si uu ula mid noqdo, wuxuuna kala sinaaday rikoodhka gooldhaliyaha saddexaad ee taariikhda xulka qaranka Brazil
Kaliya Pele (77 gool) iyo Ronaldo (62 gool) ayaa dhaliyay goolal ka badan Neymar iyo Romario.
"Waxaa jiray Waqtiyo aan ku OOYAY Barcelona waxaana Shirqoolkaas la iiga maleegay Madrid.".